Njem Nleta na Castellón - Ihe ị ga-ahụ ma mee na mpaghara a | Njem zuru oke
Castellón bụ mpaghara na obodo dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ Spain, nke ndị Obodo Valencian. Otu n'ime obodo ndị kachasị mma bụ Morella n'ihi na ọ nwere ụdị oge ochie. Nwere ike ịchọpụta ụka ya yana mgbidi ya. Peñíscola bụ ihe ọzọ dị mkpa yana otu n'ime mpaghara ebe a na-ese ihe nkiri ụfọdụ si Game nke n'ocheeze.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme njem njem, ọ ga-akpọrọ gị gaa Peñagolosa, nke bụ otu n'ime ugwu kachasị elu anyị ga-ahụ na mpaghara a. Continuega n'ihu na-anụ ụtọ okike ọ nweghị ihe dịka Irta Park, nke mere ka ị nwee echiche zuru oke banyere oke osimiri, nwere oke ugwu na ọtụtụ oghere.
Ọzọ nke maa mma obodo bụ Vilafamés, nke nwekwara ya mgbidi yana hermitages na a nnukwu ụlọ. Culla pere mpe kamakwa zuru oke ka a ga eleta ya, n'ihi aka ochie ya ọ masịrị anyị nke ukwuu. Segorbe nwere Katidral mara mma, yana arches na mgbidi. Ma n'enweghị obi abụọ ọ bụla, Castle nke Peñíscola enweghị ike ịhapụ njem anyị. Ihe karịrị mita 64 site n'oké osimiri, ọ na-achịkwa echiche dị egwu.
Na-echefughi na Castellón na-enyekwa anyị ihe ncheta dịka Basilica nke Mare de Deu de Lledó, Onye isi obodo Playa yana, Alọ Mgbakọ na Nzukọ Nzukọ ma ọ bụ Plaza de la Independencia.
Anyị na-ahụ Grutas de San José na Vall de Uxó, na Castellón. Ga-ahụ ha na ...
Anyị na-aga otu n’ime obodo ndị a na-akpọ kacha mma n’obodo Spen. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchọpụta ihe ị ga-ahụ na ...
por Ezigbo Castellón eme 6 afọ .
Otu n'ime obodo ahụ dị ka ihe mara mma ma na ị gaghị echefu ma ọ bụrụ na ị gara ma ọ bụ si na ...
Oriri nke San Antonio na ógbè Castellón, ọdịnala na ọkụ
por Ezigbo Castellón eme 9 afọ .
A na-eme ememme Sant Antoni na Jenụwarị 17 na mmemme na nsọpụrụ ya na-ahazi ...
Ondense Manuel Alfonso Ortells bụ otu n'ime ihe karịrị ndị Spen 10.000 ndị a chụgara n'ogige nke ...
Gaa na eserese ọgba nke Barranco de la Gasulla na Ares del Maestre
Maghị ihe ị ga-eme n'izu ụka a? Taa, anyị na-atụ aro ka ị gaa na eserese ọgba nke Barranco de la ...
El Fadri, akara nke Castellón
por Ezigbo Castellón eme 12 afọ .
Towerlọ mgbịrịgba a nke narị afọ nke XNUMX, nke dị n'etiti Katidral na Ablọ Abbey, na-ekwupụta awa nke obodo ...
Anụmanụ na ahịhịa nke Sierra de Irta
Sierra de Irta; Oké Osimiri Mediterenian na-eweghara akụkụ ụwa a. Ọ na-eme ya nke ya, naanị nke ya, ọ bụghị naanị ...
The Barranco de la Valltorta nwere ụlọ 21 nke Levantine Art wee bụrụ ya mere, otu n'ime ebe ...
Dika anyi kwurula na otutu oge, Columbreste Islands guzo dika otu n’ime ebe kachasi nma na ...